5 Sababaha ugu waaweyn ee safarka Transasia Express | RayHaber | raillynews
HomeDUNIDAAasiya98 Iran5 Sababaha ugu waaweyn ee loogu safro Transasia Express
14 / 01 / 2020 98 Iran, Aasiya, DUNIDA, tareenka, SAWIRADA, GUUD, Headline, TURKEY
TransAsia-muujin of-the-weyn ee-Jidka-safarka-wakiilka-5
Ku safridda tareenku waxay ku habboon tahay safarada dhaadheer oo waliba way ka awood badan yihiin diyaaradaha iyo safarada gawaarida. Rakaabka u safraya Turkey iyo Iran Transasia Express Waxaan dooranay ugu yaraan 5 sababood oo muhiim u ah doorashada tareenka.
Dhamaan rakaabka la safraya Transasia Express waxay ka hadlaan raaxada iyo raaxada ay la kulmaan inta ay safarka ku jiraan. Markaad safrayso masaafo dheer aad ayey muhiim u tahay nasasho iyo hurdo kugu filan. Kuraasta ku taal tareennada ayaa loo beddelaa sariiro waxaana qaybta ay degganaan karaan ilaa 4 qof. Dalxiisayaasha badankood waxay kuraasta u arkaan kuwa yar yar oo raaxo leh maxaa yeelay laguma fidi karo kuraasta, sidoo kale gawaarida sidoo kale. Sidaa daraadeed, rakaabku waxay u badan tahay inay daalaan inta lagu jiro duullimaadyada iyo wadista gaadiidka.
Maalmo shaqo oo adag kadib, dhammaanteen waxaan ku riyoonaa inaan fasax u baxno si aan u helno xaalad deggan. Waxaan rajeyneynaa inaan kali ku ahaano fikradaheena iyo inaan ku jirno jawi nabdoon. Socotada Transasia Express waxay fursad u leeyihiin inay ku raaxeystaan ​​aragtiyo xiisa leh iyo aragtiyo xiisa leh. Rakaabka tareenka ku jira waxay dareemayaan inay xor ka yihiin caadada iyo daalka.
Illaa iyo hadda, qof kasta oo raaca diyaaradda ayaa dhibaato ka haysatay shandaddiisa, taasoo xad u ah 8 kg ama 20 kg. La'aanta xuduudaha ee alaabooyinka shaqsiyadeed ayaa faa iido weyn u leh dalxiisayaasha doorta inay tareen ku safraan. Waxaad macno ahaan u soo qaadan kartaa waxyaabo badan oo aad rabto inaad ku iibsato Transasia Express. Qofna ma miisaami doono boorsadaada mana hubin doono haddii aad dareere ku shubtay dhalada 100 ml.
Dalxiis kastaa wuxuu siiyaa qiimo badbaado inta lagu guda jiro safarka. Tareenka waxaa loo arkaa habka ugu nabdoon ee gaadiidka.
Maalinta ama bisha aad ku raacdo tareenka ma aha muhiim maxaa yeelay safarka had iyo jeer waa isku mid. Haddii aad go'aansato inaad fuusho Transasia Express berrito ama usbuuca soo socda, qiimuhu saameyn kuma yeelan doono tigidhkaaga. Xasilooni waa waxa ay safraan oo dhami qireen.
Sidaa darteed, haddii aad damacdo inaad safarkaaga Turkiga ama Iran, hadda waa Transasia ExpresWaa ikhtiyaar fiican inaad ka fikirto ku safridda tareenka S.
Sababaha Sababaha Awoodda Korantada ee Eskisehir Yt Line Works
Sababta dib udhigista Keçiören Metro
Ankara - Mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare ee Bursa Sababta Dhulgariirkii ka dhacay Yenişehir…
Waa kuwan sababta shilalka ee YHT
Saarooyinka saldhigga Marmaray waxaa sababa biyo ka daadinta ama kiimikada
Tareenka Transasia Express
Qiimaha tigidhada Transasia Express
Iibso tikidhada Transasia Expressi
Qiimaha tigidhada Transasia Expressi
Wadada Transasia Expressi
Waqtiga safarka Transasia